Raharaha Antanimbarinandriana : NANDRESY IREO MPIANATRA MIISA 1 075 -
AccueilRaharaham-pirenenaRaharaha Antanimbarinandriana : NANDRESY IREO MPIANATRA MIISA 1 075
Raharaha Antanimbarinandriana : NANDRESY IREO MPIANATRA MIISA 1 075
10/02/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Taorian’ny fanapahan’ny filan-kevi-panjakana dia nidina teny amin’ny Epp Antanimbarinandriana ny minisitra ny Fanabeazam-pirenena, sy ny minisitra miandraikitra ny tetikasan’ny Filoham-pirenena, ny fanajariana ny tany, ny fampitaovana, omaly maraina. Nandritra ny dinika ho an’ny mpanao gazety, ireo minisitera roa ireo dia nanipika fa nandresy ny fanirian’ny mpianatra miisa 1 075, naniry ny hisian’ny Trano famakiam-boky sy trano Fisakafoanana. « Tsy ifandroritana intsony araka izany iny raharaha iny fa mijanona eo », hoy ny minisitra Rafidimanana Narson. Tetikasa fampandrosoana ity atao ity satria ho an’ny tombontsoan’ny ankizy mpianatra.Tsy nanavahana fa zanaka malagasy rehetra no mianatra ao. 480 m 2 no refin’ity trano famakiam-boky ity ary tena hanaraka ny fenitra moderina ny ambony rihana hisy azy. Ankoatra io dia mbola hisy trano hisakafoanan’ny ankizy, « Cyber café-médiathèque » ny aty ambany rihana. Nitohy araka izany ny asa raha somary nihantona kely teo. Tsy tokony hatao ambanin-javatra ny ho avin’ny ankizy satria mitarika azy ireo any amin’ny fanovozam-pahalalana sy fahaizana ny fisian’ny tranomboky. Ny Talen’ny sekoly ihany koa dia efa nahita malala tanana nanao ny efitrano maromaro sy ny kianja filalaovana Baskety. Finiavana manokana avy amin’ity Talen’ny sekoly ity ihany koa no nahafahana nanao an’izao fotodrafitrasa vaovao izao araka ny fangatahan’ny mpianatra. Tsiahivina moa fa nosakanan’ny kaomina ny fanatanterahana ity fotodrafitrasa ity, kanefa nandresy ihany ny mpianatra.
Nanohana ny Tale
Araka izany dia nilaza ny minisitra ny Fanabeazam-pirenena fa “fanohanana ny Talen’ny sekoly no nataon’ny Fanjakana. Satria ity Tale ity no nanana finiavana nanatanteraka ny asa”. Hatramin’izay dia mahatratra 3 000 ny fangatahana fanorenana efitrano fianarana isan-taona. Ny vitan’ny minisitera dia 200, ny vitan’ny mpamatsy vola dia eo amin’ny 200 ka hatramin’ny 300 eo, ny vitan’ny mpiray ombon’antoka dia 800 eo ho eo ary tsy nisy naka fahazoan-dalana izany izy ireo. Eto Madagasikara dia mahatratra 30 000 ny isan’ny sekoly. Misokatra malalaka ny varavaran’ny minisitera hatramin’izay ary ny minisitera no manome alalana ny any amin’ny Kaomina manerana ny nosy amin’ny fanorenana ireny sekoly ireny. Betsaka ny fanampiana ataon’ny minisitera ho an’ireo Epp manerana ny nosy, ao ny Cantine, ny fampidirana ny mpampianatra ho mpiasam-panjakana, ny fanomezana ny subvention an’ireo sekoly, ny Kits fampianarana, ny Kits ho an’ny mpampianatra, sns. Ny tanjona dia ny fanatsarana ny fampianarana ary hifaninanana ny fananganana ny efitrano fianarana. Misokatra ny varavarana ary tsy izahay tompon’andraikitra indray no ho vato misakana ho an’ny fampandrosoana. Tsy tokony hipetraka ny sakantsakan’ny fanjakana. Tsara ny mampatsiahy fa tsy misy idiran’ny resaka politika ity raharaha ity fa tena fitsinjovana ny zanaka malagasy.
Loza nahamay ny fiaran’ny PM Ntsay : Hosamborina ireo mponina
Mihorohoro ny mponin’Ivandry noho ny fihetsika ataon’ny avy eny anivon’ny fiadidiana ny Praiminisitra, taorian’ilay lozam-pifamoivoizana nitranga teny ivandry ny sabotsy lasa teo. Efa nandeha, ary mbola mitohy mantsy ny fisamborana ireo olona noheverina fa nandray ...Tohiny
Famatsiam-bola :HATSANGANA NY RAFITRA MPANARA-MASO
Gare Routière « Maki » : Tobim-piantsonana goavana indrindra aty Afrika
Minisitra Sinoa Wang Yi: Nanamafy ny fanamboarana ilay « Autoroute »